Kitra: mety hilalao any Espaina i Ibrahim Amada | NewsMada
Araka ny vaovao hita ao anaty tambajotran-tserasera, firenena roa ny mitady an’i Ibrahim Amada, irakiraka mandrafitra ny Barea de Madagascar. Samy mitady azy avokoa i Espaina sy i Maraoka.
Nahoraka tao anaty tambajotran-tserasera, omaly alatsinainy, fa mety tsy hilalao ao amin’ny Mouloudia Club Alzeria intsony ilay Malagasy, i Ibrahim Amada, amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Araka ny fantatra, firenena roa: i Maraoka sy i Espaina no mety hifindrany. Tsy mbola fantatra kosa anefa ny anaran’ireo klioba mitady azy.
Ho fantatra, ny fiandohan’ny volana desambra ho avy io, izay tena hilalaovany na any Espaina na ao Maraoka. Anisan’ny naharesy lahatra ireo “agent recruteur” ny zava-bitany sy ny endri-dalao nasehony, nandritra ny filalaovany tao amin’ny Barea de Madagascar, nandritra ireny fifanintsanana ho an’ny “Can 2019” ireny.
Raha tsiahivina, mpilalao novolavolaina tao amin’ny Akademia Ny Antsika Vakinankaratra i Amada, nanomboka ny taona 2005 ka hatramin’ny 2011. Taorian’io, nilalao tany Alzeria hatrany ny tovolahy. Nanombohany izany ny tao amin’ny JS Kabylie, herintaona ihany ny nijanonany tao. Nandalo tao amin’ny AS Khroub izy avy eo ary tao amin’ny USM El Harrach, ny taona 2012 ka hatramin’ny 2015.
Nanatevina ny ES Sétif indray ny taona 2015 ka hatramin’ny 2017 ary ao amin’ny Mouloudia, amin’izao fotoana izao. Nahatafiditra baolina 16 i Amada hatramin’izay nilalaovany atsy Alzeria izay. 28 taona ny tovolahy ankehitriny ary ao anatin’ny heriny tokoa. Marihina fa anisan’ny lalao tena nampiavaka azy ny fihaonana nikatrohan’ny Barea de Madagascar tamin’ny Liona Senegaley, natao tetsy Mahamasina ny alahady 9 septambra lasa teo.